Announcements – University of Computer Studies, Hinthada
Academic 2018-2019 Mid Term Re-Exam Time Table
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် အထူးကျွမ်းကျင်အဆင့် ကမ္ဘာချန်ပီယံပြိုင်ပွဲ၂၀၁၉(MOSWC) အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်များဖိတ်ခေါ်ခြင်း ပထမအဆင့် တက္ကသိုလ်တွင်းပြိုင်ပွဲအတွက် အသက်(၁၃)နှစ်မှ (၂၂)နှစ်ရှိ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ဟင်္သာတ)မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ယှဥ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။ ယှဥ်ပြိုင်မည့်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ သည် (၅.၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ Software ဌာနတွင် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ Microsoft Word 2013 , Microsoft Excel 2013 ,Microsoft Power Point 2013 မိမိနှစ်သက်ရာတစ်မျိုးကိုရွေးချယ်၍ယှဥ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။ University-Level ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့်ရက် အချိန် -နံနက်(၉း၀၀နာရီ) မှ နံနက်(၉း၅၀)ထိ နေရာ -Lab-2 ရက်စွဲ -(၂၂.၂.၂၀၁၉)၊သောကြာနေ့ Please follow and like us:
KDDI Application Contest
Due for submission of University Level Application ContestDue for submission of Application FormAnnouncement of Finalist TeamsFinal Demonstration/EvaluationOnly undergraduate students are eligible for thiscontest.Each team consists of up to five students.( A team of one student is also eligible.): December 20th, 2018: January 10th, 2019 : January 30th, 2019 : February 23rd, 2019 Please follow and like us: